काठमाडाैं : बानेश्वरको कात्यायनी चोक नजिकै सडकको एकातिर एउटा सवारी साधन रोकियो । दुई लेनको बाटो, एकातर्फ सवारी रोकिएपछि सो लेन नै छेकियो । ‘तपाईंले यसरी पार्किङ गर्दा अरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो लाग्दैन ?’, सोध्दा उनले रिसाउँदै भने, ‘पार्किङ गर्ने ठाउँ पनि त हुनुपर्‍यो नि !’ र, उनी नजिकैको चिया पसलमा छिरे ।
सोही प्रश्नमा अर्का व्यक्तिले भने सरकार समक्ष पार्किङको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे । यी दुई सवारी चालक जथाभावी पार्किङ गर्ने चालकका प्रतिनिधि पात्र हुन् । कात्यायनी चोकको बाटो भएर निस्कँदा पार्किङस्थल जस्तै देखिन्छ । थुप्रै स्थानमा जथाभावी पार्किङ गरेको देख्न सकिन्छ यहाँ ।
हामी देश समृद्ध भएन भन्छौँ । नेताले भाषण मात्र गरे, देश बनाएनन् भनेर चिया पसलमा बस्दै धारे हात लगाउँछौँ । दोषजति अरूको टाउकोमा थोपरेर आफू चोखो बन्ने नेपालीको बानी नै बन्दै गएको छ ।
देश विकास भएन भनेर रट्टा मार्दै दुई–चार साथीभाइ गफिँदै बेथितिका कुरा गर्छौं– चिया पसलमा पुग्नुअघि सवारी साधनचाहिँ सडकमै पार्किङ गरेर ।
एक पटक सम्झौँ त आफैँले गरेको बेथितिका कुरा । कस्तो बेथितिको कुरा गर्दै छौँ हामी ? सडकमै सवारी पार्किङ गरेर अरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्नुचाहिँ थिति हो र ?
भनिन्छ नि– परिवर्तन आफैँबाट सुरु गर्ने हो । सामान्य कामबाट सुरुवात गर्ने हो । आफूले गर्दा अरूलाई असहज हुन्छ भन्ने ठानेर साना कुराहरूमा पनि ख्याल गर्दा आफू, समाज र राष्ट्रलाई नै त राहत पुग्नेछ ।
सडकमा सवारी पार्किङ गर्दा आफूले पार्किङ गरेको सवारीका कारण दुर्घटना हुने सम्भावना पनि त हुनसक्छ । सवारी जाम त हुने नै भयो ।
ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता जयराज सापकोटा भन्छन्, ‘जहाँ पायो त्यहीँ पार्किङ गर्नुहुँदैन भन्ने ज्ञान पनि छ । अरूलाई असहजता हुन्छ भन्ने थाहा पनि छ । हामीले कार्बाही पनि गरिरहेको छौँ तैपनि जहाँ पायो त्यहीँ पार्किङ गरिएको भेटिन्छ ।’
कार्बाहीमा पर्नेहरूले आफूहरूलाई अत्याचार गरियो भन्ने गरेको र एकछिन सवारी रोकेर सामग्री किन्न पनि नपाइने भन्दै प्रतिप्रश्न गर्ने गरेको सापकोटाको भनाइ छ । त्यसो भए कार्बाही बलियो नभएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘एक पटक कार्बाहीमा परेकाहरू अलिक सचेत भएका छन् । अझै जथाभावी गरे यसलाई चेत नखाएको भन्नुपर्छ ।’
ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को फागुन मसान्तसम्ममा २४ हजार १०५ सवारी साधन जथाभावी पार्किङअन्तर्गत कार्बाहीमा परेका छन् ।
ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले नो पार्किङअन्तर्गत कार्बाही गर्ने गरेको छ भने महानगरले सवारी साधन नै उठाएर लैजाने पनि गरेको छ । तथापि, जथाभावी पार्किङमा भने कमी आउन सकेको छैन ।
झट्ट हेर्दा सानो लाग्ने तर दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने कुराहरूमा ध्यान दिने बेला आएन र ? सडक किनारमै यी दृश्य हेरिरहेका र संवाद सुनिरहेका केही मानिस भन्दै थिए, ‘जहाँ पायो त्यहीँ असरल्ल सवारी पार्किङ गरेर सभ्य नागरिक बनिन्छ र ? नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी असभ्यताको परिचय दिएपछि देश कसरी बन्छ र ?’